उमेर अनुसार दैनिक कति घण्टा सुत्ने ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/उमेर अनुसार दैनिक कति घण्टा सुत्ने ?
कम सुत्नुका कारण गुम्सावट, टेन्सन र चिडचिडापनजस्ता समस्या देखिन सक्छ । साथै कम निन्द्राको कारणले मानसिक तनाव जस्ता समस्याहर पनि देखिन सक्दछन् । तपाई जुनसुकै उमेरसमुहको मानिसको हरेक मान्छेलाई आफ्नो उमेरको हिसावले सुत्न आवश्यक हुन्छ ।समय मिलाएर सुत्दा तपाईको छाला चाडै बुढो हुदैन र तपाई लामो समयसम्म स्वस्थ र खुसी जीवन जीउन सक्नुहुन्छ ।कुन उमेरको मानिस कति घण्टा सुत्न आवश्यक छ : ३ महिना देखि ११ महिनासम्मको नवजात शिशुको लागि : १४ देखि १५ घण्टाको सुत्न आवश्यक हुन्छ । १२ देखि ३५ महिनाको बच्चा : १२ देखि १४ घण्टाको सुत्न आवश्यक छ । ६ देखि १० वर्षको स्कुल जाने बच्चा : १० घण्टा सुत्न आवश्यक छ । ११ देखि १८ वर्ष उमेर समुह : कम्तिमा ९ घण्टा निदाउन आवश्यक छ ।
जागिरे वा पेशेवर मानिस जस्को उमेर २० वर्षभन्दा माथि छ, उसको लागि कम्तिमा आठ घण्टाको निन्द्रा आवश्यक हुन्छ । बुढापाकाको लागि सुत्नको कुनै समयसिमा छैन निर्धारण गरिएको छैन् ।यदी तपाई यसरी नै आफ्नो उमेरको हिसाबले सुत्ने समय तय गरेर नियमितता दिनुहुन्छ भने यसले तपाईलाई धेरै फाइदा मिल्नेछ । जसको अनुभव तपाई आफैले गर्नु हुनेछ ।
स्वास्थ्यको सूचना : निर्देशिका विपरितका नमुना परीक्षण नगर्नू
महिलासँग सल्किएर मध्यरातसम्म वडाध्यक्ष कार्यालयमै भेटिएपछि स्थानीयले गरे तालाबन्दी